Rohan Oxandrolone (Anavar) mpamokatra sy mpamatsy - Factory
Roan Oxandrolone (Anavar) vovoka (53-39-4)
5.00 avy amin'ny 5 miankina amin'ny 2 mpanjifa naoty
Oxandrolone dia angano an-tsôkôzôma steroide anabolic testosterone. Ity mpiasa ity dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana fanoloana testosterone amin'ny lehilahy hypogonadal, amin'ny sendikan'ny otrikaretina VIH, ary amin'ny toe-javatra hafa mba hampitombo ny fihazonana azota sy ny voany tsy misy tavy.
Rano Oxandrolone (Anavar) vovoka (53-39-4) video
Rano Oxandrolone (Anavar) vovoka (53-39-4) Description
Ny rojo Oxandrolone roapolo dia steroid iray nataon'olombelona, ​​mitovy amin'ny fitsaboana testosteron natsangana. Ny poizina Oxandrolone dia "steroide" anabolic izay mampiroborobo ny fitomboan'ny taolam-paty. Io dia ampiasaina hanampiana anao hamerina ny lanjany very taorian'ny fandidiana, aretina mafy, na aretina mitaiza. Ny Rohan-koditra Anavar Anavar koa dia ampiasaina amin'ny olona izay tsy mahazo na mitazona lanjany ara-pahasalamana noho ny antony ara-pahasalamana tsy fantatra. Raw Oxandrolone powderis koa dia nampihena ny fahaverezan'ny muscle vokatry ny fampiasana fanafody steroid, ary hampihena ny fanaintainan'ny taolana amin'ny olona manana odyopera.
Ny sterile Anavar Raw Anavar dia steroids anabolic ho an'ny fitsaboana fampidiran-dresaka mba hampiroboroboana ny lanjany taorian'ny lanjan'ny lanjany taorian'ny fandidiana lehibe, ny aretina mitaiza, na ny marary mafy, ary ny marary sasany izay tsy manana antony ara-pahasalamana voafaritra tsara dia tsy mahazo na mitazona ny lanjany ara-dalàna, Ny kisendraseran'ny proteinina mifandray amin'ny fitantanana maharitra ny corticosteroids, ary ny fanamaivanana ny fanaintainan'ny taolana matetika miaraka amin'ny osteoporose. Anabolic steroids dia avy amin'ny synthetic derivatives of testosterone.
Roan Oxandrolone (Anavar) vovoka (53-39-4) Specifications
Product Name Roompono Oxandrolone (Anavar)
Anarana simika Anavar; Oxandrin; Protivar; Vasorome
Drug Class Androgen, steroide anabolic
molekiolan'ny Formula C19H30O3
molekiolan'ny Wvalo 306.44
mitsonika Point 235-238 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Adults: 9.4-10.4 ora, Loholona: ora 13.3
Solubility 2 mg / mL (vahaolana mazava; hafanana)
Storage Temperature Vokatry ny fitantanana, -20? C Frizidera
Application Mba hahazoana antoka fa ampy ny kaloria sy ny proteinina ny vatana mba hiantohana ny balan'ny azota.
Inona ny roah Oxandrolone (Anavar) (poizina 53-39-4)?
Oxandrolone (53-39-4), amidy eo ambanin'ny anarana famokarana Oxandrin sy Anavar, ankoatra ny hafa, dia fanafody androgen sy anabolic (AAS) izay ampiasaina mba hampiroboroboana ny fahabetsoana amin'ny toe-javatra isan-karazany, mba hanampiana ny fanasitranana proteinina vokatry ny ny fitsaboana kortikosteroid efa hatry ny ela, mba hanohanana ny fialana amin'ny lelafo mivaivay, mba hikarakarana ny fanaintainan'ny taolana mifandray amin'ny osteoporose, mba hanampiana amin'ny fampandrosoana ny zazavavy miaraka amin'ny syndrome of turner, ary ho an'ny famantarana hafa.
Ahoana ny fomba famonoana roah Oxandrolone (Anavar) (53-39-4) asa
Nandritra ny fifandraisana molecular, i Anavar dia niasa tamin'ny fanolo ny karbona-2 tamin'ny atomin'ny oksizenina satria miova tanteraka ny rafitra. Ny natiorany dia manampy azy hanohitra ny fandotoana ny vatany ka hahatonga azy io ho mahomby kokoa ho an'ireo izay mampiasa izany. Rehefa mitranga indray ny fanovana faharoa, ny toerana faha-17 amin'ny karbaona dia mamaritra ny fiovana eo amin'ny molekiola ka lasa sokajiana ho steroid anabolic. Anavar mora mifatotra amin'ny receptors androgen, ary izany dia manampy amin'ny fahafahany manome safidy ara-pahasalamana. Ny fifehezana ny mpandoka ny androgen koa dia manampy azy hampiasa hormone triiodothyronine izay hita ao amin'ny vatana.
Roahina Oxandrolone (Anavar) vovoka (53-39-4) Dosage
Tsy maintsy takatra voalohany aloha fa matetika i Anavar no mifototra amin'ny steroids hafa anabolika amin'ny tsingerina. Izany dia noho ny fahitan'ny maro an'i Anavar ho tahaka ny steroid anabolic, ary noho izany dia ilàna ny filana hafa steroïde anabolic hafa hampiasaina amin'izany. Noho izany, ny dosie teo aloha Anavar izay notendren'ny anabolic steroid amin'ny fampiasana fiarahamonina ho an'ny tanjona fampivoarana ny fampiroboroboana dia tao anatin'ny 15 - 25mg isan'andro ho an'ny mpandray anjara. Na izany aza, amin'izao andro izao, miaraka amin'ny fahalalana sy fampahalalana maoderina maoderina, ny fanombohana doses dia soso-kevitra kely dia kely kokoa, araka ny asehon'ny fanadihadiana sasany izay takiana amin'ny marary Anavar ao amin'ny 20 - 80mg isan'andro ho an'ny mararin'ny SIDA mba hisakanana sy hamerenana dian-tongotra . Amin'ity fananganana ity dia azo antoka ny filazana fa tokony hanomboka amin'ny 30 - 50mg isan'andro ny fandraisana anjaran'ny Anavar. Ireo mpandindona dia fantatra amin'ny ankapobeny fa manatsara kokoa ny fampihenana ny doses isan-karazany raha oharina amin'ny mpampiasa steroide anabolic, na fandrosoana. Ity dia tranga be no naseho eto, ary amin'ny hery ananan'i Anavar izay amn'ny 3 farafaharatsiny amin'ny Testosterone farafahakeliny, ny mpandimby dia tokony ho afaka hahazo tombony betsaka avy amin'ny laharana voalaza etsy ambony. Ny tahan'ny dipoavatra Anavar dia matetika dia mitovitovy amin'ny 50 - 80 mg isan'andro, ary ny mpampiasa misoroka dia mihamitombo avo kokoa noho io faritra io, izay ho an'ny 80 100mg isaky ny andro ambony. Na dia izany aza, zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny famaritana ny mpampiasa steroid anabolic (raha ny momba ny steroid rehetra anabolic) dia tsy ampy doses. Anavar dia matetika no mifangaro amin'ny zavatra hafa, araka ny voalaza etsy ambony. Misy ihany koa ny mpisera maro te hampiasa Anavar ho voalohany amin'ny anabolika amin'ny cyber, izay ahafahan'i Anavar dosages any amin'ny faran'ny faran'ny faritra iray voatondro, raha toa ka ambany ny ambany (toy ny Testosterone Eropeana) Fitsaboana - TRT - doses an'ny Testosterone).
Vehivavy Anavar Dosage
Anavar dia toy ny steroid anabolic izay ampiasaina amin'ny atleta vehivavy, noho ny hery ambany kokoa raha oharina amin'ny testosterone sy steroids hafa anabolic. Tsy dia fahita loatra ny fampangatsiahana amin'ny fampiasana ny dosie vavy vavy vavy Anavar. Ny toro-lalana ara-pitsaboana tany am-boalohany dia tsy nanonona ny torolalana manokana amin'ny Anavar ho an'ny vehivavy. Na izany aza, eo anivon'ny fiarahamonina ara-panatanjahan-tena sy ara-batana, ny doka mahazatra ho an'ny tanjon'ny fampiroboroboana sy ny fampivoarana ara-batana dia ny an'ny 5 - 10mg isan'andro, izay amin'ny vehivavy iray dia tokony hamokatra tanjaka tsara sy fiovana ara-nofo miaraka amin'ny fihenan-tsakafo ho an'ny androgenic side vokatry. Ilaina ny fampiasan'ireo mpampiasa vavy Anavar mandritra ny fe-potoana tsy maharitra mihoatra ny 4 - herinandro 6 noho ny vokatra androgenic mifandray amin'i Anavar. Na dia misy steroid anabolika tahaka ny mavitrika toy ny Anavar amin'ny lafiny androgenic effects dia afaka ary hamokatra virilization hafa vokatra ny ela ny fitambarana dia mihazakazaka.
Rano Oxandrolone (Anavar) vovoka (53-39-4) tombony
Ny kanseran'ny Anavar dia miteraka fanafihana ao anatin'ny fetran'ny fampiasana azy. Ny Oxandrolone dia tsy manamboatra volo araraka. Noho izany, rehefa levona ilay lanjany, dia lasa mihevi-tena ho masiaka. Midika izany fa mety ho kely ny fitazonana ny rano amin'ny hozatra rehefa mampiasa Anavar. Ny hormone dia miavaka amin'ny fatran'ny steroïde hafa toy ny Anadrol ary mamoaka hozatry ny foza. Ny tombony amin'izany dia ny fahazoan'ny olona ampiasaina rehefa mampiasa an'i Anavar dia mora kokoa ny mitazona azy noho ny zava-bita amin'ny alalan'ny fampiasana andian-tsakafo hafa mamorona steroid. Noho izany, dia mety ho an'ny olona izay te handraraka fatin-kibo ary koa mitazona ny bikany.
Na dia mety ho fanesorana ho an'ireo lehilahy te-hiaina be dia be aza izany, dia raisina ho an'ny vehivavy izany. Ny ankamaroan'ny vehivavy dia tsy maniry ny hampitombo be toy ny an'ny lehilahy, ary ity steroid ity no fitaovana tena tsara indrindra hahazoana ny antso an-tariby.
Ampitahaina amin'ny testosteron amin'ny lehilahy matetika i Anavar. Mahagaga fa manampy ny vehivavy mahazo tenda ny tazomoka raha toa ka manome voka-bary kely fotsiny amin'ny lehilahy izany. Ny vehivavy dia afaka ampiasaina amim-pahasahiana tsy misy tahotra amin'ny fampitomboana ny toetran'ny lehilahy.
Maro ny olona te hanamaivana ny fatin'izy ireo amin'ny vatany tsy voatery ho mpanao biriky. Rehefa tratran'izany olana izany ny ankamaroan'ny olona, ​​dia mijery ny fikarakarana azy ireo sy mandray anjara amin'ny fiasa ara-batana mafy handoro ny taviny. Na izany aza, dia tsy miteraka mivadika ny fatin-tsolika ho an'ny hozatra izany. Anavar dia natao hiditra sy hameno ity bitika ity. Mba hampihenana ny voka-bary matavy dia tokony halaina ny kaloria bebe kokoa noho izay ampiana. Ny fikarakarana sakafo dia mahasoa amin'ny famenoana ny tavy ao amin'ny vatana, saingy ao anatin'izany dingana izany dia misy ny hozatra sasany very ka manome ny vatana ho toy ny tsy fetezana. Anavar dia manome fahafahana hamela ny hozatra hihazona azy rehefa mihintsana ny tavy.
Ankoatra izany, ny fampiasana ny steroid dia manome fahafahana ny vatana hahomby kokoa amin'ny fandoroana ny tavy ao anatin'ny fotoana fohy. Ny mpampiasa dia mibaribary sy voafaritra kokoa rehefa mampiasa azy fa tsy toy ny olon-kafa izay tsy nampiasa steroid anabolic.
Ny zavatra manan-danja indrindra mahatonga an'i Anavar izay steroid indrindra amin'ny bodybuilders dia ny manampy azy ireo handany haingana ny lanjany, raha mbola mitazona ny volo marefo. Na izany aza, tsy tokony hanantena valiny toy izany ianao raha tsy mampiofana ny vatana sy ny fihinanana sakafo madio.
Fanatsarana ny atleta
Amin'ny ankabeazan'ny fanatanjahantena, ny volon'ny vatana dia mety ho fisakanana ny asan'ny olona. Izany no mahatonga an'i Anavar ankatoavin'ny ankamaroan'ny atleta ho toy ny tsiranoka mahatsikaiky, satria manampy amin'ny fanatsarana ny vatany izy io ary mitazona ny vatana mangatsiaka ilaina. Na dia tsy mahomby toy ny hery manome hery steroïde toy ny Halotestin sy Dianabol aza i Anavar, dia mbola ilaina ihany ny manome angovo atleta. Ny tanjaka mifandray amin'ny steroid dia azo ekena satria mitarika haingana sy hery bebe kokoa izy mandritra ny fiasa ara-batana. Ny zava-mahadomelina dia mitazona ny fihazonana rano kely toy ny tsy ahafahan'ny atleta miha-betsaka amin'ny fampiasana fiaramanidina. Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny Proviron ho an'ny taova
Mihatsara ny fahasitranana
Ny fampiasana Anavar dia mitarika ho amin'ny fanatsarana ny fiaretana amin'ny hozatry ny hozatra. Ny hozatra dia ho mafana kokoa mandritra ny fotoana maharitra, ary noho izany dia tsy ho reraka haingana ilay olona. Izany dia mahatonga ny fanafody steroid ho an'ny fampiasana atleta izay te hampitombo ny vokatra amin'ny fampiofanana. Anavar dia manao izany rehetra izany ary manatsara hatrany ny faritra hafa amin'ny vatanao ka mahatonga azy io ho anisan'ny steroids tsara indrindra amin'ny vanin'andro ankehitriny.
Buy Buy Oxandrolone (Anavar) avy amin'ny Buyaas.com
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba Anavar (Oxandrolone) ho an'ny bodybuilding
Doeker B, Muller-Michaels J, Andler W, fampidiran-danja ny fahazazan'ny fahatanorana eo amin'ny zazalahy iray aorian'ny fitsaboana amin'ny Oxandrolone? Horm Res 1998; 50 (1): 46-8
Deming RH, DeSanti L., Oxandrolone, steroide anabolic, J Trauma 1997Jul; 43 (1): 47-51
Rohan Stanozolol (Winstrol) (10418-03-8)
Roahina 4-Chlorodehydromethyltestosterone (2446-23-3)
Roahina Liothyronine Sodium (T3) vovoka (55-06-1)
Rojo Oxymetholone (Anadrol) vovoka (434-07-1)